. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .: October 2011
ခု ရှယ်ထားတဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အရပ် (၁၀)မျက်နှာ မေတ္တာပို့လေးကို တင်ချင်နေတာ ကြာပါပြီ .. အွန်လိုင်းမှာ လိုက်ရှာတော့လည်း မတွေ့ အဆင်မပြေတာနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် အပ်လုတ် လုပ်ပြီး တင်လိုက်ရတာပါ .. တခုခု အဆင်မပြေတာများရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ .. :D
ခု တင်ထားတဲ့ မေတ္တာပို့ကို မိုးခါး ဆိုင်အလုပ် စလုပ်တည်းက ခုချိန်ထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ သိမ်းထားပြီး မနက်တိုင်း လိုလိုဖွင့်ဖြစ်ပါတယ် .. ဆိုင်တုန်းကတော့ ဆိုင်ကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ပရိတ်ကြီး (၁၁)သုတ်၊ ဓမ္မစင်္ကြာ၊ ပဌာန်း နဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အခု မေတ္တာပို့လေးကို ဖွင့်ပြီး မနက်ပိုင်းတရား အစီအစဉ် သိမ်းတတ်ပါတယ် .. စုစုပေါင်း ၃နာရီလောက် ကြာပါတယ် .. နောက်ပိုင်းကတော့ သီချင်း ကဏ္ဍပေါ့လေ .. :D ခု ဒီမှာတော့ မနက်ထတာနောက်ကျတာရော ဘာရော ညာရောနဲ့ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ကတော့ မဖွင့်ဖြစ်သလောက်ပါပဲ .. ဓမ္မစင်္ကြာနဲ့ မေတ္တာပို့ကို များသောအားဖြင့် ဖွင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ် .. အရင်တုန်းက မေတ္တာပို့ကို နာရတိုင်း ဆရာတော်ကြီး ရှေ့မှာပြောတဲ့ ကမ္ဘာကြီး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေတယ် .. ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က ကပ်ကြီးတွေနဲ့ လွတ်နေတယ် ဆိုတာကို ကြားရတိုင်း ဟုတ်တယ်ပေါ့ .. မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေက မေတ္တာတရားတွေ ကိန်းအောင်းကြတယ် .. စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းတွေ ရှိကြတယ် .. ဗြဟ္မာစိုရ်တရားတွေ ကိန်းနေကြတယ် .. ဒါကြောင့် ကပ်ဆိုးတွေကနေ လွတ်နေကြတယ်လို့ စိတ်ထဲမှတ်ထင်မိပါတယ် .. တကယ်လဲ ကိုယ်တိုင် အရွယ်တော်တော် ရောက်တဲ့အထိ မှတ်မိ သလောက် မြန်မာနိုင်ငံက သူများနိုင်ငံ စူနာမီဆိုလည်း လွတ် ငလျင်ဆိုလည်း လွတ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. ခုအခြေအနေကိုများ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး မြင်တွေ့ရင် ဘယ်လိုမျိုးများ ပြောမယ် မသိပါဘူး .. ကိုယ်တိုင် ဥာဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားမိတော့လည်း လူတွေ လူတွေ စိတ်ဓါတ်တွေ ပျက်ပြားလာတာနဲ့ အမျှ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း လုပ်လာကြတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ဖို့ သမားတွေ များလာတာနဲ့ အမျှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ပျက်စီး .. အဲလိုပျက်စီးလာတာနဲ့အမျှ ရာသီဥတုတွေက ဖောက်ပြန် .. ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကလည်း ခေါင်းစဉ်အမည်နာမ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့နေကြရတော့တာပါပဲ ..
ဟိုးအရင်ကဆို ပစ္စည်း ဥစ္စာမပြည့်မစုံပေမယ့် လူတွေက ပျော်ကြတယ် .. စိတ်ချမ်းသာစွာ နေနိုင်တယ် .. ခု ခေတ်မှီပစ္စည်းတွေ ပိုမိုပြည့်စုံလာတဲ့အခါ အရင်ထက် ပိုပြီးတော့ ပျော်သင့်ကြပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ရုပ်ဝတ္တုတွေ တိုးတက်သလောက် စိတ်ဓါတ်တွေ ဆုတ်ယုတ်လာတယ် .. ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြည့်စုံလာသလောက် အစစ်အမှန်တွေ ဆုံးရှုံးလာတယ် .. အကောင်းအဆိုးတွဲနေတာ မှန်ပေမယ့် အဆိုးနည်းရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ ..း)
ခုတော့ အနိဌာရုံတွေ မြင်တိုင်း ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံး မေတ္တာပဲ မျက်စိစုံမှိတ် ပို့လိုက်ပါတော့တယ် .. ကိုယ်တတ်နိုင်တာဆိုလို့ ဒါပဲရှိတာကိုး ..း)
အဲဒီတော့ ခုလည်းပဲ ရေဘေး မီးဘေး ငလျင်ဘေး စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး နဲ့ ကြုံတွေ့နေရသူ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေကို မေတ္တာပို့ပြီး မေတ္တာတရား ခေါင်းပါးနေကြတဲ့ လူအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ် ပျောက်နေသူတွေအတွက် သတိတရားလေး ပြန်ကပ်လာအောင် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ် ..
မေတ္တာတရားက အေးချမ်းလှပါတယ် .. ပူလောင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကိုယ်စီ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ လန်းဆန်း အေးမြလာစေဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကုစားကြရအောင်ပါ ..
"သားကြီးရေ .. သားကြီး .. မီရေ သားကြီး ဘယ်ရောက်နေတာလဲကွာ .. ခေါ်လိုက်ပါဦး .. ကိုယ်သွားရမယ့် အချိန် နီးနေပြီ .." "ကို့သားကြီး ခုနကတော့ ခြံထဲတွေ့တာပဲ .. ခဏလေး မီသွားကြည့်လိုက်ဦးမယ် .."
"သား ကျောင်းဝန်းထဲက ဇီဇ၀ါပန်း သွားခူးနေတာ မေမေ .. ဖေဖေ့ဖို့ .. ရော့ ဖေဖေ .. ပြန်လာရင် သားဖို့ မုန့်နဲ့ အရုပ် ၀ယ်ခဲ့နော် .." "ဟား .. ဟုတ်ပါပြီဗျာ .. ငါ့သားက ဘာအရုပ် လိုချင်တုန်း .."
အဲဒီအချိန် မေမေ့မျက်နှာမှာ စိုးရိမ်စိတ်တချို့ ယှက်သန်းနေတာ ကျနော် ဂရုပြုမိပါတယ် .. ကျနော်လည်း ဖေဖေ့ကို စိတ်ပူတယ်လေ .. သားလည်း ဖေဖေနဲ့ လိုက်ချင်တယ်လို့ ပြောချင်တယ် .. ဒါပေမယ့် ကျနော်လိုက်ခွင့် မရှိမှန်းလည်း သိနေပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဖေဖေမောင်းတဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီး ကျနော် အရမ်းစီးချင်တယ် .. ----------
ဖေဖေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာစကားကို နားမှာကြားနေရင်း .. မျက်ရည်တွေ သွင်သွင်ကျရင်း ကျနော့်နှုတ်ခမ်းက စကားလုံးတခု ထွက်ကျလာခဲ့တယ် .. "ဖေဖေ .." ခုလိုမောဟိုက်ပြီး နိုးထလာတဲ့ မနက်ခင်းပေါင်းများစွာကို ကျနော် အလွန်မုန်းတီးလှပါတယ် .. ဖေဖေဆုံးပါးပြီးနောက်ပိုင်း ကျနော့အခု အသက် ၂၀အထိ ခုလို ဆိုးဝါးလှတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ် .. နောက်ဆုံးမှာ ဖေဖေက တနည်းနည်းနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ် .. နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်တို့ပဲ ကျန်ခဲ့တယ် ဖေဖေ ..
10/14/2011 02:30:00 PM
အဆောင်မျက်နှာစာ အဆောင်အနီးမှ Food Court အဲဒီအဆောင်နဲ့ ကျောင်းကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျမစိတ်ထဲ ဖြစ်မိတာက ငါတို့ နိုင်ငံက ကျောင်းတွေ အဆောင်တွေသာ အဲလို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ စနစ်တကျရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ ပေါ့ .. ဖြစ်လာမှာပေါ့လေ တချိန်ချိန်ပေါ့ ..း)
10/07/2011 12:04:00 AM